Hetsika vitsy mpahalala? | Hevitra MPANOHARIANA |
Hetsika vitsy mpahalala?
2018-01-12 @ 18:42 in Ankapobeny
Nivory sy niresaka tamin'ny mpanao gazety ireo mpivarotra manana trano fivarotana eo amin'ny Pavillons Analakely. Fanairana no ataon-dry zareo mba hanesorana amin'izay ireo mpivarotra amorony sy anaty lalana izay mibahana ny mankany amin-dry zareo fa mamono tanteraka ny varotra ataon-dry zareo ireo mpivarotra hafa ireo sady efa manorina trano hazo mihitsy ivarotana. Nolazain-dry zareo ihany koa fa efa imbetsaka nanao antso avo tamin'ny Kaominina ry zareo amin'ny hanesorana ireo mpivarotra mibahan-dalana ireo saingy mbola tsy tontosa izany mandraka ankehitriny.
Ny zavatra iray nahafinaritra ahy tamin'ity raharaha ity dia hita fa te-handala ny maha-renivohitr'i Madagasikara an'Antananarivo ireto nanao antso avo ireto ka tsy tokony isian'ny savoritaka mihitsy. Marina izany. Hamoaka ny hevitro manokana amin'izay aho.
Hetsiky ny saranga antonony ity hetsika ity ka tsy ho zakan'ireo milaza tena ho "madinika" mihitsy. Hetsiky mpandoa hofantrano sy mpandoa hetra, hetsik'ireo miezaka ny haha-ara-dalàna azy fa tsy hihazakazaka amin'ilay fisainana hoe rehefa tsy hiasa ireo dia hangalatra, toy ny hoe miasa sy mangalatra ihany no azo atao eto ambonin'ny tany. Hevitro manokana dia izany hetaheta ivoarana izany indrindra no nifidianan'ny maro an'isa nandatsa-bato teto Antananarivo ny mpitantana an'Antananarivo amin'izao fotoana, saingy tsy afa-manoatra amin'ny tsy fanomezana izay tokony ho anjara volany avy amin'ny fitondrana foibe ka mitady ny fomba maro ahazoam-bola hampiodinana ny asa fitantanana.
Ny hevitro mikendry ny hampisintahana tsikelikely ny tsena ao afovoan-tanàna mba hametrahana azy ireny aty amin'ny tanàna itatra, ivelaran'ny tanàna araka ny tokony ho izy fa tsy ikombonany ao anatin'ny faritra mihiboka sy kely. Mifanindran-dalana izany ny itadiavana ireo toerana ahafahan'ny fiara miantsona sy hamelomana indray ny lalamby hivezivezen'ny olona avy amin'ny tanàna manodidina sy ny tanàna itatra amin'ny ao afovoan-tanàna. Tsy hitako loatra anefa izany fa zavatra hafa no hitako.
Zavatra iray hitako ho fahadisoan'ny Fiadidiana ny tanànan'Antananarivo dia ny fitadiavana ireo toerana malalaka rehetra ao an-tanàna ho lasa toeram-pivarotana raha tsy efa fantatra mialoha ho zaridaina io toerana io na toerana maitso voakolokolo. Gaga anefa ny tena nahita ny fanorenana nataon'ny Kaominina ery amin'ny rond-point avy aty ampitan'ny CENAM mankany Ambodin'Isotry na mankany Ampasika-Itaosy izay heverina ho toeram-pilalaovan'ny ankizy ny ao ambadika fa toeram-pivarotana kosa ny anoloana. Tsy mety mihitsy ny nanaovana ilay fanorenana eo amin'ilay toerana satria takona tsy mahita ireo fiara avy any Ampasika na Itaosy mihitsy ireo fiara avy aty ampitan'ny CENAM, lasa mampidi-doza amin'ny resaka fifamoivoizana noho izany eo amin'io rond-point io raha tsy hoe terena hivily mankany amin'ny lalana mizotra ho any Ampefiloha daholo ny fiara avy any Ampasika rehetra ka miodina eo amin'ilay tetezana voalohany akaikin'ny banky iray (roa ireo) amin'iny lalan'ny CENAM iny.
Tsikera io ary tsikeram-pitiavana satria nandrotsa-bato ho an'ireo mpitantana ankehitriny, sady tsy mbola nanenina tamin'izany noho ny fahavitsian'ny safidy azo natao. Fa araka ny mety ho efa fantatry ny mpamaky dia ny fandaminana ny tanàna ho endriky ny fandrosoana no tadiaviko fa tsy azoazoko loatra ny fanomezana vahana ny "madinika" izay ataon'ny pôlitisiana fitaovana politika matetika ka avela hanao zavatra tsy mampilamina ny tanàna amin'ny arabe ho an'ny fiara misy maotera, ny sisin'arabe ho an'ny mpandeha an-tongotra ary trano mafy orina manara-penitra kosa no ivarotan'ny mpivarotra. Dia mirary taombaovao mahafinaritra ho antsika rehetra.
Jentilisa 12 janoary 2018